Mayelana NATHI | Yuanda
ISuzhou Yuanda Commercial Products Company yasungulwa ngonyaka we-1990. Igxile kakhulu emashalofini ezitolo ezinkulu zokutadisha, ukuklama kanye nemikhiqizo. ama-warehouse racks, i-trolley yokuthenga, obhasikidi bepulasitiki nezinye izinto zokusebenza, kufinyelela kumakhulu ezinhlobo nokucaciswa. Nginweba ibhizinisi layo ezimakethe ezifuywayo nezamazwe omhlaba, ngihlanganisa imakethe yaseYurophu, imakethe yaseMelika, imakethe yaseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, i-Oceania equkethe izifunda nezindawo ezingaphezu kweziyishumi. Lesi sitshalo esise-Economic Development Zone - idolobha laseChangshu, esifundazweni saseJiangsu, futhi sakha isikhungo sokuthengisa edolobheni laseWuhan nase-Yiwu.
Ngokukhula okungaguquguquki futhi okuzinzile, u-Yuanda utshale imali ukwakha ifektri entsha ngo-2010, nokuqinisa ekutshalweni kwemali kuzinto zokutshala imali, ukwenza inqubo yokushaya isibhakela okungalawuleki, ukushisela okuzenzakalelayo, ukusika okuzenzakalelayo nokunamathisela kwe-static spray kanye neminye imishini ezenzakalelayo , zihlose ukuqedela konke ukukhiqizwa okuzenzakalelayo ukuze kuthuthukiswe ngokuyisisekelo amandla wokukhiqiza.
I-Yuanda izohlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo evumayo futhi idale inzuzo ethe xaxa ethembekile ngekhwalithi yayo ephezulu kanye nensizakalo ephelele. Ngaphezu kwalokho, singathanda ukubambisana nawo wonke amakhasimende abambe iqhaza ekwakheni ikusasa eliqhakazile.
Inkampani yakwaYuanda igcizelele ekukhuliseni amathalente Ngomqondo nokubonakala okucacile emakethe, la mathalente amancane athuthukisa futhi aklama imikhiqizo emisha yokugcina imikhiqizo eyaziwayo endaweni yomncintiswano othukuthele.Banolwazi okungenani lweminyaka emihlanu embonini yamashalofu, futhi banolwazi futhi ukuhweba kwamanye amazwe.
Sihlanganyele emibukisweni eminingi, njenge-China Canton Fair, i-Germany Euroshop, i-GlobalShop e-USA, i-Russia International Free Brand Exhibition, umbukiso wezentengiso waseThailand, njll. Sinokuhlangenwe nakho okucebile embukisweni, futhi samukela wonke umuntu ukuthi abambe iqhaza embukisweni wethu.
Igumbi Lethu Lesampula:
Sinegumbi elikhulu lesampula elingamamitha-skwele angama-500, elinamashalofu amakhulu, izinqola, amabhasikidi okuthenga, indawo yokugcina izinto, njll.